Author Topic: Prakat Pangeni (प्रकट पंगेनी ‘शिव’) ghazals (Read 16600 times)
« Reply #10 on: February 17, 2017, 09:52:38 PM »
« Reply #11 on: February 17, 2017, 09:52:49 PM »
« Reply #12 on: March 14, 2017, 10:27:25 AM »
पंगेनिको सबै भन्दा चर्चित गजल
तप्पतप्प जलविन्दु चुहाएर के निस्कियौ
स्निग्ध, कोमल, कञ्चन आहा नुहाएर के निस्कियौ
भाग्यमानी रै'छ साबुन फिँजैफिँज भई बरालियो
जुन साबुनलाई अंगअंग छुवाएर के निस्कियौ
पानी पनि आगो बन्छ कामदेवको आशिष् पाए जुन पानीमा यस्तो रूप डुबाएर के निस्कियौ
घामको कुरा नगरौं भो, टाँसियो घाम त्यै लुगामा
जुन लुगालाई तिम्ले भर्खर सुकाएर के निस्कियौ
त्यै गाँठोमा गाँठो पार 'प्रकट'लाई ओ रुपसी,
जुन गाँठोमा कोमल अंग लुकाएर के निस्कियौ !
« Last Edit: January 17, 2018, 10:29:01 AM by tundikhel »
« Reply #13 on: January 14, 2018, 02:28:56 AM »
« Reply #14 on: January 17, 2018, 10:27:37 AM »
~प्रकट पगेनी ‘शिव’~Prakat Pageni Shiva
तिम्रो हातले भरि गिलास पिलाएको छुट्टै मज्जा
कोखाइ-कोखाइ भन्दै सितन खिलाएको छुट्टै मज्जा
को हुन्छन् र ओठ टोक्दै गिलास भर्दै दिने मान्छे
त्यसमाथि झन् बाहुपास नै दिलाएको छुट्टै मज्जा
मध्यरात छ हामी दुई छौं चकमन्न अँध्यारो छ
छामछाम-छुमछुम गर्दै ओछ्यान मिलाएको छुट्टै मज्जा
यता मैले तान्दा उता तिम्ले तान्दा फाट्यो च्यादर
अँध्यारोमै त्यस्तो च्यादर सिलाएको छुट्टै मज्जा
« Reply #15 on: January 17, 2018, 10:28:31 AM »
अन्ना, अनुश्रेया र प्रकट
'जाडो महिना आउँदै छ रे भन्ने सुनेकी छु
मैले मेरो हजुरलाई स्वीटर बुनेकी छु'
काठमाडौंमा जाडोले बिस्तारै पखेटा खोल्दै छ । बिहान-साँझ सिरेटोले जिस्क्याउन थालेको छ ।
साँझ पर्दै गरेको समय । गजलकार प्रकट पगेनी 'शिव' आफ्नो गजलमा घुसेर स्वीटर बुन्नPrakat-Pageni तम्सिने गुनिला नारीहरूलाई निकै सम्झिरहेछन् । बुनिएका स्वीटर खोइ कुन कुनामा छाडेर आएका छन् । उमेरमा ५५ काटेको ज्यानले साँझको सिर्सिरे बतासलाई नवयुवक झैं चुनौती दिएका छन् ।
हामी बागमती किनारको चौरमा छौं ।
बागमती, जसले सभ्य दाबी गर्ने काठमाडौंलाई छिटा पार्दै चिरेको छ । कुराकानी गर्नुअघि बागमतीको कसम खाएका छैनन् प्रकटले, कसम खान लायक पवित्रता वागमतीसँग छैन पनि । यसैले कसम नखानुपर्ने वागमतीछेउ श्रीमतीलाई बिर्सिएर दूरका प्यारीहरूलाई सम्झिँदै छन् । उनी बैंसले कुतकुतिएका गजल लेख्छन् । प्रेमको प्राप्ति र वियोगका गीत पनि लेख्दै आएका छन् । जीवनयात्रामा छुट्टिनुपरेका पात्रलाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनको सिर्जनामा श्रीमती इन्दु ओझेल परेकी छन् । 'अलग्गै रहने प्रेमिका र जीवन नै बिताउनुपर्ने श्रीमतीबीच नितान्त फरक हुन्छ', आत्मीयताको क्यालकुलेटरबाट यसरी हिसाब निकाल्छन् प्रकट ।
प्रकटले साहित्यिक वृत्तमा केही धारिला आरोप खेप्दै आएका छन् । औधी रसिक, शृंगारिकताको नाममा अश्लील गजलका सर्जक आदि । उदाहरणमा आरोपकर्ताहरूले उनले लेखेका रतिरागयुक्त गजल अघि सार्ने गरेका छन् । प्रकटका गजलका सेरहरू पनि छन् उस्तै काउकुती लगाउने । २०६४ सालमा एकल गजल वाचनका लागि पोखराबाट काठमाडौं भित्रँदा उनले आरोहण-गुरुकुलको हलमा खचाखच स्रोता पाए । 'प्रणयमा प्रकट दाइ' नाम दिइएको कार्यक्रममा युवायुवतीको झुन्डबीचमा ताली खाँदै उनले जोसिँदै एकपछि अर्को रापिला गजल सुनाएका थिए -
कार्यक्रमको भोलिपल्ट अखबारहरूमा पलेंटी कसेको उनको फोटोका साथमा प्रणयको गजलमा सहर उर्लिएको खबर थियो भने एकथरी साहित्यिकहरूबाट प्रकटका गजल अश्लील भयो भन्ने टिप्पणी आइरहेको थियो । तर उनको शृंगारिक रसको मसी अझै उस्तै छ । प्रकट लेखिरहेछन् -
अलि छोटो लगाइस्स्यो चोली मै'सापले
चोलीबाटै चलाइस्स्यो गोली मै'सापले...
Prakat-Pageni-2'अश्लीलता भन्ने कुरा केहीमा हुँदैन' उनी आफ्नो सिर्जनाको बचाउ गर्छन्- 'दृष्टिकोणमा भर पर्छ, कसरी हेर्ने ।' सडकमा युवतीहरूले मिनीस्कर्ट लगाएर हिंडिरहँदा बटुवाले आँखा छोपेर हिंड्न नमिल्ने उनको तर्क छ । ५५ नाघिसकेको उमेरमा पनि प्रेमका कुरा गर्ने, रोमान्टिक गजल लेख्ने भनेर धेरैले उनलाई प्रश्न गरेका छन् । तिनीहरूमध्ये कति त उनीभन्दा साना उमेरका पनि छन् । 'मेरो उमेरको चरण पार नगरी त्यस्तो टिप्पणी गर्नेहरुलाई भोलि मेरै उमेरमा आएर प्रकट दाइले ठीकै गरेको रहेछ प्रेम र यौनका कुरा गरेर भन्ने लाग्नेछ,' यो उनको भविष्यवाणी । किनभने यो उमेरमा पनि उनलाई यौनले कुतकुत्याइरहेछ । उनी रोमान्टिक सिर्जनाका लागि छेक्ने कुरा र नलेख्नुपर्ने कारण केही देख्दैनन् ।
बुढ्यौली आउँदैमा रोमान्टिक सोच बन्द गर्नुपर्ने नियम उनको मनले रिडिङ गर्न सकेको छैन । 'मेरो परिभाषामा त अझै पनि म जवान नै छु, ५५ वर्ष नाघ्दा पनि यौन भन्ने कुरा जाँदो रहेनछ', प्रकटले यो कुरा भन्नुभन्दा पनि जीवनमै अनुभूति गरिरहेका छन् । यसैले उनी प्रेम गरिरहेछन्, लेखिरहेछन् ।
बाटामा अल्पवस्त्रमा ठमठम हिंडिरहेका नारी-शरीर देख्दा सालिक बनेर टोलाउँछन् । यो उमेरमा पनि यौन क्षमता भरपूर हुनुमा आफ्नो सकारात्मक सोचलाई कारण मान्छन् उनी । लाखौं स्पर्मको युद्ध जितेर चिट्ठा परेको जीवन प्यारो लाग्छ प्रकटलाई । यसैले जिन्दगीलाई चाटिचुटी पारेर स्वाद लिइरहेछन्, बाँचिरहेछन् । उनको बुझाइमा प्रेम र यौन फरक कुरा भए पनि प्रेममा यौन पनि थपिए सुनमा सुगन्ध हुन्छ । नभए पनि फरक पर्दैन रे ।
स्पर्शरहित प्रेमको पक्षमा उभिँदै आएका छन् प्रकट । 'प्रेम शाश्वत कुरा हो । आदर्श प्रेम सम्भव छ,' पण्डित जस्तै दोहोर्‍याइरहन्छन् । सृष्टिको केन्द्रमा यौन रहे पनि प्रेमिकालाई स्पर्श नै गर्नुपर्छ भन्ने उनलाई लाग्दैन । कास्कीको लुम्ले कृषि केन्द्रमा १० वर्षसम्म काम गरे उनले । त्यस क्रममा बस्दा भेटिएकी अन्ना होस् या आफूभन्दा निकै कम उमेरकी अनुश्रेया, सबैलाई आदर्श प्रेम गरे उनले । पछि अन्ना एकाएक बेपत्ता भई र निकै अन्तरालमा देखा परी, सिन्दूर भरिएको सिउँदोसहित । आज प्रकट अन्नालाई गुमाउनुपरेकोमा चुकचुकाउँछन् । अन्नासहितका केही घनिष्ट युवतीको उनले प्रेमपूर्वक नाम राखेका छन् । समाजका सामु तिनको नाम लिँदा पनि आवरणको काम गर्ने !
आफूभन्दा निकै कम उमेरकी अनुश्रेयासँग उनको घनिष्टता भयो । तर सधैं खटपट भइरहने । तैपनि पहिलो प्रेमसहित तीनैवटा प्रेमको किस्सालाई सँगाल्दै आफैंलाई प्रताडित बनाएर हिंडिरहेका छन् उनी । 'मान्छेहरू मलाई फलाना/फलानीले बिर्स्यो भनेर गुनासो गर्छन्, अब सम्बन्ध सकियो, मलाई बिर्सिदिनू भनेर चेतावनी दिन्छन्,' उनी सम्बन्धको लेखाजोखा गर्छन्, 'सम्झना आइहाल्छ, सम्झना छउन्जेल सम्बन्ध कुनै न कुनै रूपमा कायमै हुन्छ ।' प्रेममा जोडी साथसाथै रहनु-नरहनुले त्यति अर्थ नराख्ने पनि यी प्रेमशास्त्रीको परिभाषामा देखियो ।
२०३२ सालको कुरा । एसएलएसी दिनेबित्तिकै उनको एउटी केटीसँग चिनजान भयो । केटी पोखराकी, उनी आफू कास्कीको देउराली-उकाली गाउँका । सञ्चारको सुविधा अहिले जसरी सहज भइनसकेको जमानामा एक वर्षसम्म पत्राचार चल्यो । पत्रबाटै भेट्ने ठाउँ टुंगो लगाएर उनी गाउँबाट पोखरा झर्थे, प्रेमिकासँग भेट्न । केटीको घरमा अर्कै केटासँग बिहेको कुरो चल्यो । अन्तरजातीय बिहेको चलन अहिले जस्तो आइसकेको थिएन त्यो बेला । प्रेमिका थिई नेवार परिवारकी । उनले आँट गर्न सकेनन् । फेरि एसएलसी दिएर बसेको ठिटोसँग न त टेक्ने जमिन थियो, न त समाउने हाँगो नै !
केही उपाय नदेखेपछि उनले 'ल न त बिहे गर' भनेर बिदाइ गरे । जब केटीको बिहे भयो, त्यो प्रेम कति महत्वको रै'छ आफ्नो लागि भन्ने उनले बल्ल बुझे । निकै तड्पिए । आकुल-व्याकुल मनले भेट्न खोज्दा केटीले अब नभेटौं भनेर पन्छाइरहिन् । बिहेपछि जम्मा एक पटक भेटेको त्यो पहिलो प्रेमिकाको माया अझै उनको मनबाट मेटिएको छैन । यादले उनी काँक्रा झैं चिरिन्छन् र त्यसमा नुन थपिइरहन्छ ।
'धेरैजसोलाई अहिले प्रेम भन्नेबित्तिकै आई लभ यू भनिहाल्नुपर्ने, एकान्तमा घुम्न गइहाल्नुपर्ने, अँगालोमा बेरिहाल्नुपर्ने, चुम्बन गरिहाल्नुपर्ने, र्स्पर्श कतिखेर गरुँ भनेर मौका छोप्ने हतारोले छोप्छ,' उनले आधुनिक प्रेम विज्ञान पढेका छन् । यस्तोमा उनको स्पर्शरहित प्रेमको परिभाषा उहिलेको कुरा खुइले लाग्न सक्छ । उनी भने त्यही खुइलिएको पानामा पुराना प्रेमिकाको चित्र ठम्याएर बिनास्पर्श सुमसुम्याइरहन्छन् ।
पोखरा बसाइमा विषयरहित विषयका शिक्षक बनेर पढाए उनले । कहिले विPrakat-Pageni-3द्यार्थीलाई पोखरा चिनाउँथे, कहिले भने अभिनय, उद्घोषण र शिष्टता, नम्रताको कुरा सिकाउँथे । शिक्षित परिवारमा जन्मिएका प्रकट आफूलाई भने भाग्मानी मान्छन् । त्यो समयमा आमा आठ कक्षा पास थिइन् । वरिपरि लाहुरेहरूको घरमा आउने चिठीपत्र पढेर सुनाइदिने आमा नै थिइन् । 'लाहुरबाट काँचो धागो बेरिएको चिठी आउँदा रुवाबासीको साक्षी हुनुपर्दा मन निकै पिरोलिन्थ्यो,' उनी सम्झिन्छन् । तिनै लाहुरेनीहरुको आँसुको ढिका जोखेको उनको मन सधैं कमलो भइरह्‌यो । जोसँग पनि खुलिदिन्छन् । पोखरामा सरुभक्त, उषा शेरचन, विजय वजिमय लगायतका दौंतरीसँग सरसंगत गर्दा उनी लोकलय हुँदै गद्य कविता र गीत-गजल कोर्ने भएका थिए । नत्र उनी नाट्यकर्मका मान्छे । २०३९ सालमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको नाटक महोत्सवमा 'गोलार्द्धको कालो आकाश' मार्फत सर्वोत्कृष्ट अभिनेताको पुरस्कार पनि जितेका थिए ।
काठमाडौंमा संघर्ष गर्ने गरी उनले पाँच वर्षअघि पोखरा र त्यहाँका समकालीनहरूको घुलमिल छाडे । उनकै भनाइमा साहित्यिक राजधानी पोखरा छाडेर मोफसल काठमाडौं आए । ३० वर्षसम्म बसेको ठाउँमा फेरि फर्किने सम्भावना सुरक्षित राख्दै उनी अर्को सम्भावना खोज्दै काठमाडौं पसेका थिए । साहित्यिक कर्म अघि बढाउँदै जीविका चलाउने सोचले काठमाडौं आए पनि उनले अवस्था अनुकूल देखेनन् । 'काठमाडौं हामी जस्तो भावनात्मक मान्छेका लागि होइन रहेछ,' यही सोचले उनी विरक्तिएर केही समयमै पोखरा फर्किए । सिर्जना गर्नका लागि पनि उनलाई काठमाडौं उपयुक्त ठाउँ लागेन । पोखरामा हित्तचित्त मिल्छ उनको । अहिले फेरि बैशाखदेखि काठमाडौंमै छन् । पाठशाला नेपाल स्कुलका साथै दुई ठाउँमा पढाउने काम पाएका छन् । तर उनमा भने आफूले पहिले काम गर्दै आएको जनचेतनाको क्षेत्रमा काम गर्ने इच्छा छ । दुई छोराछोरीले काठमाडौंमै बसेर लेखपढ गर्नु भने पनि मन बाँधिन सकेको छैन उनको ।
उमेरको उकालो सिंढीमा रहर जति छन्, योजनाका चाङ पनि त्यति नै बाक्लो छ । मृत्यु सत्य हो भनेर जान्दाजान्दै र शरीरमा अहिलेसम्म जटिल समस्या केही नदेखिए पनि उनी बेलाबेला डराउँछन्, 'फ्याट्ट केही भइहाल्यो भने त धेरै कुरा अपूरो रहनेछ ।' जीवनयात्रामा घुलमिल हुन आउने जति पात्र भेटे, सबैलाई सिर्जनाकर्मका लागि प्रेरणा बनाएका छन् उनले । पोखरामै पढाउने क्रममा भेटिएकी एउटी छात्राको सन्दर्भमा उनले लेख्न सुरु गरेका थिए 'सिम्रिकाको डायरी' उपन्यास । यसैगरी, खटपट परिरहने पूर्वप्रेमिकाको विषयमा लेखिएको अर्को उपन्यास 'मैले विवाह गरें नि प्रकट दाइ' को पनि अन्तिम तयारीमा जुटेका छन् उनी । दोस्रो उपन्यासमा आफैंलाई खलपात्रको रूपमा प्रस्तुत गरेको उनले सुनाए । आजसम्म जसले आफ्नो हातमा कलम पाए, उसले आफ्नै प्रशस्तिगान लेखेका छन् । उनले भने आफ्नै हुलिया उतारिदिएका छन् ।
आफ्नो उपन्यासमा आफैंलाई खलपात्र बनाएर प्रकटले पूर्वप्रेमिकाहरूप्रति देखाएको आदर्श प्रेमको सिग्नल उनीहरूसम्म प्रसार होला ?
« Reply #16 on: February 04, 2018, 12:58:19 AM »
« Reply #17 on: August 06, 2018, 10:14:45 PM »
« Reply #18 on: August 06, 2018, 10:15:15 PM »